နာမညျတဈခုနောကျကှယျ​က ကွီးမားသော မဟာဗြူဟာ – Kyaw Zaw Oo's Blog
December 12, 2019 January 14, 2020 web_master
နာမညျတဈခုနောကျကှယျ​က ကွီးမားသော မဟာဗြူဟာ
နာမည်တစ်ခုနောက်ကွယ်​က ကြီးမားသော မဟာဗျူဟာ
တစ်။ ပြီးခဲ့တဲ နှစ်နှစ် ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်အကျပ်အတည်းကာလထဲက ၂၀၁၇-ခုနှစ် တစ်နှစ်တည်းအတွင်းမှာ မြေထဲပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးသကာလ လူမှောင်ခိုသင်္ဘောတွေစီးပြီးသကာလ ဥရောပတိုက် အီတလီကမ်းခြေကို ဆိုက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဒုက္ခသည်ဆိုသူတွေထဲက အများဆုံးသော လူအရေအတွက်တို့ရဲ့ ပင်ရင်းတိုင်းပြည် (country of origin) ကို သင်တို့ သိကြပါသလား။ ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကတော့ “ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်” ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်လှိုင်းကို ကြုံလို့ ၀င်စီးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ (ကမ်းပေါ်ကိုရောက်ပြီးနောက် အခြေအနေအခွင့်အလမ်းအပေါ်မူတည်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ လို့ အမည်ခံသင့်ရင် ခံမယ့် သဘောရှိတယ်။)
နှစ်။ ၂၀၁၂ နဲ့ ၂၀၁၇ အကြားကာလ (ဒီကာလနောက်ပိုင်းလည်း ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်) မှာ နတ်မြစ်ဝ ၀န်းကျင်ကနေ ထိုင်းတောင်ပိုင်းတရောက် လူမှောင်ခိုပို့တဲ့စက်လှေတော်တော်များများ ဘယ်ကလူတွေကို ပို့တယ်လို့ထင်ပါသလဲ။ ရခိုင်အခြေစိုက်စက်လှေတွေတော့ မသိဘူး၊ ဘိတ်အခြေစိုက် စက်လှေတွေကတော့ မောင်တောကလူတွေကို ခေါ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး တဲ့။ ဘင်္ဂလာထဲကို တိုက်ရိုက်ဝင်လို့ လူခေါ်တင်ပြီးနောက် ထိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ မလေးရှားကို ပို့တာဖြစ်ပါသတဲ့။ စစ်တွေထောင်ထဲရောက်နေခဲ့တဲ့ ဘိတ် လူမှောင်ခိုသမားအချို့က ကျွန်တော့်ကို ပြောလိုက်တာ။ (သူတို့ပို့လိုက်တဲ့ လူတွေကတော့ ဟိုကိုရောက်ရင် ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်ကို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။)
သုံး။ ဒီလိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ သူတို့အခေါ် ဒိုင်ယာစပိုရာ ရို ဆိုသူတွေရဲ့ အရေအတွက်ဟာ ဘယ်လိုမျိုး သိန်းဂဏန်း ဘယ်လိုမျိုး သန်းဂဏန်း ရှိနေပါတယ် လို့ သူတို့ ဖောင်းကားပြောဆိုထားတာ ရှိမရှိ လေ့လာ ဆန်းစစ်ဖူးပါသလား။ အဲသည် ဖောင်းကား ရို အရေအတွက်ဟာ ခင်ဗျားတို့က နိုင်ငံတကာကို ကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လစ်ဘရယ်ဆန်တယ်လို့ ဂုဏ်ယူချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲသည်နာမည်လိမ်ကို လက်ခံလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာပြည်ထဲကို မိခင်တိုင်းပြည်အဖြစ် ၀င်ရောက်လာကြမယ့် အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
လေး။ မိုဟာမက်ကို ဆက်ခံသူများရဲ့ အစ္စလမ်မစ် ဆူလတန်နိတ်နိုင်ငံတော်ဟာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြန့်ကားခဲ့ရာမှာ အရှေ့ဘက်က အိန္ဒိယကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ မဂိုအင်ပါယာဟာ ရခိုင့်နိုင်ငံနဲ့ ထိတွေ့ပြီးနောက် ဒီလမ်းကြောင်းမှာ ရှေ့တိုးတာ ရပ်သွားခဲ့တယ်။ အခုတစ်ဖန် ခေတ်သစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလမ်မစ် ဆူလတန်နိတ်ပမာ တင်စားကြတဲ့ OIC ဟာ ဂမ်ဘီယာကို နာမည်ခံခိုင်းပြီး ရခိုင်ဒေသမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ အတွက် မြန်မာပြည်ကို ICJ မှာ တရားစွဲတဲ့အတွက် အခု တရားဆိုင်နေရတယ်။ (မြန်မာ ကိုယ်စားပြု ရှေ့နေကြီးက မနေ့က ဒါကို အသေအချာ ထောက်ပြခဲ့တယ်။) ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှု သက်သက်လို့ အသင် ထင်ပါသလား။
ငါး။ ဘင်္ဂလာနဲ့ မြန်မာအစပ်က ယခုအခါ Cox’s Bazaar လို့​ခေါ်တဲ့ ဒေသဟာ နေထိုင်ဖို့ရာ လူမရှိလို့ အင်္ဂလိပ်တွေက (အင်္ဂလိပ်​ဗိုလ်​ Cox က) ရခိုင်တွေကို ခေါ်ယူနေရာချထားပြီး လူနေအိမ်ခြေတွေ ဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကို အသင် ကြားဖူးပါသလား။ Cox’s Bazaar မှာတောင် ရခိုင်တွေကို ခေါ်ပြီးနေရာချထားခဲ့ကြတာ ဆိုတော့ . . . Cox’s Bazaar ရဲ့ အရှေ့ဘက်ကျတဲ့ မောင်တော နဲ့ ဘူးသီးတောင်မှာ အဲသည်အချိန်က ဘင်္ဂါလီတွေ လုံးဝ ရှိခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သေချာပေါက်ပြောနိုင်ပါတယ်။ သတိထားစရာအချက်က လူစီးကြောင်းဟာ အနောက်ဘက်ကို ရွေ့သထက်ရွေ့လာပြီး နှစ်ငါးဆယ် တစ်ကြိမ်ကျ ဆန်းစစ်ကြည့်တိုင်းမှာ သိသာတဲ့ ပထ၀ီလူဦးရေ အချိုးအစား ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကို သတိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခြောက်။ ၁၉၄၃ ဘင်္ဂလားအငတ်ဘေးမှာ ဘင်္ဂလားပြည်နယ်တစ်ခုတည်းသက်သက် လူ ၂.၁ သန်းနဲ့ သုံးသန်းကြား အငတ်ဘေးကြောင့်သေခဲ့ရတယ်။ အဲသည်အချိန်က တာဝန်အရှိဆုံးလို့ပြောရမယ့် ဗြိတိသျှနန်းရင်းဝန် ၀င်စတန်ချာချီပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်မဲ့စကားတစ်ခွန်းကို အသင် ကြားဖူးပါသလား။ သူကပြောတယ် တဲ့၊ အဲသည်ဒေသသားတွေဟာ “ယုန်တွေလို သားပေါက်” (bred like rabbits) တယ်လို့ သူကပြောပါသတဲ့။ ရယ်သွမ်းသွေးလိုတဲ့သဘောနဲ့ ဒါကို ကျွန်တော်က ထပ်ဆင့်ပြောတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် total installed capacity မက်ဂါဝပ် နှစ်သောင်းကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု နဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့မှာ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ လူဦးရေတိုးပွားမှုကို အထိုက်အလျောက်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလာအတွက်တော့ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ လူဦးရေတိုးပွားမှု သည်ပင်လျှင် အင်အားဖြန့်ကျက်မှုဖြစ်တယ်။
ခုနစ်။ မနေ့က ICJ တရားခွင် ဒုတိယနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် Agent ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ရို ဆိုတဲ့စကားလုံး တစ်လုံးမှမပါဘဲ သူ့ရဲ့ statement ကို ပြောကြားသွားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်စောင့်ကြည့် ချီးကျူးမိတယ်။ တစ်နေ့တည်းမှာပဲ အေအေခေါင်းဆောင်နဲ့ ဧရာတီသတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျုးမှာ စစ်တကောင်းသားဘင်္ဂါလီတွေကို ဘင်္ဂါလီတွေလို့ပဲ ခေါ်ဝေါ်တာဟာ လျော်ကန်သင့်မြတ်မှုနဲ့ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု ရှိကြောင်းတို့ကို တင်ပြပြောဆိုထားချက်ဟာ မြန်မာလူမျိုးများအားလုံးနဲ့တကွ ရခိုင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ ဖတ်ရှုသင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ် ဆိုတာ သတိထားမိတယ်။ ရခိုင်တွေရော မြန်မာတွေပါ မူဆလင်တို့နဲ့ မလိုအပ်ဘဲ အကျယ်အကျယ် မဖြစ်သင့်တဲ့အခြေအနေမှာ သူတို့ရဲ့လူသားဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်တွေကို အသိအမှတ်ပြုသော်ငြားလည်း ဘင်္ဂါလီလို့သာ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်သင့်ကြောင်းကို သံတမန်ဆန်ဆန် သေသပ်ကျနစွာ သူ့ရဲ့ ရှင်းလင်းတင်ပြမှုဟာ ဥာဏ်ပွင့်မှုကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ “ဥပမာ လူသန်း ၂၅၀ လောက်က နတ်မြစ်ကမ်းကို ကူးလိုက်တာနဲ့ ဘင်္ဂါလီတစ်ယောက်မှ မရှိတော့ဘူးလား” ဆိုတဲ့စကားဟာ လင်းကနဲ လက်ကနဲ မြင်သာစေတယ်။
ရှစ်။ မနေ့က မြန်မာကိုယ်စားပြု ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကတင်ပြရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရို ဆိုတဲ့စကားလုံးကို လုံးဝ သုံးမသွားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေကြီးက လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ သုံးသွားတယ်။ အသုံးကျယ်ပြန့်လာတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကို ဥပုဘ်သီလစောင့်သလိုမျိုး လုံးဝရှောင်ကြည် ဝေရာမဏိဖို့ရာ ခက်ခဲတဲ့ အနေအထားတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် အခြေအနေ နဲ့ ထိုမဟာဗျူဟာမြောက် အခြေအနေတွေမှာရောက်နေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ မဖြစ်မနေ သည်အသုံးအနှုန်းကို လုံးဝအသိအမှတ် မပြုဖို့လိုတယ်၊ လုံးဝ မသုံးစွဲဖို့လိုတယ်။ ထမင်းရည်ပူစည်း ရှိရမယ့် ကြီးစွာသော အခြေအနေတောင်းဆိုချက် ရှိပါတယ်။
ကိုး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာနှစ်ဆယ်လောက်က Francis Buchanan Hamilton ဆိုသူ ဥရောပတိုက်သားတစ်ယောက်က အင်းဝ၊ အမရပူရ ဘက်မှာတွေ့ခဲတဲ့ ရခိုင်သားအချို့ကို မေးရာမှာ မိမိကိုယ်ကို ရခိုင်သား လို့ ခေါ်ပါတယ်လို့ ဖြေခဲ့တာသာလျှင် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာရှိတဲ့ မှတ်တမ်းကိုအခြေခံပြီး Rooinga ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ အဲသည်အချိန်ကတည်းက ဒီလူမျိုး ရှိတယ်လို့ သူတို့ ပုံဖော်တတ်ကြလေ့ရှိတယ်။ ဒီလိုမျိုး နာမည်သစ်လူမျိုးပုံဖော်မှုဟာ ၁၉၅၁-ခုနှစ်မှာ စတင်ပေါ်ပေါက်တယ်။ အခုအချိန်မှာကျတော့ ရို နာမည်ဟာ သမိုင်းအရ မှန်ကန်မှုရှိမရှိ ဘက်က မဟုတ်တော့ဘဲ လူအုပ်စု တစ်ခုဟာ မိမိကိုယ်ကို စိတ်ကြိုက်နာမည်တပ်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဘက်က သူတို့ချဉ်းကပ်လာကြပါတယ်။ ကနဦးမှာ ကိုယ်ကိုယ်ကို ဘင်္ဂလီလို့ ခေါ်တဲ့လူတွေက အများတကာအများစုဖြစ်ပြီးတော့ ရို နာမည်သုံးစွဲကြတာကို ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မြင်ခဲ့ကြပေမယ့် အဲသည်နာမည်ကို သုံးလိုသူအရေအတွက်ဟာ ရခိုင်ဒေသနေ ကျွန်တော့် မျက်စိရှေ့မှာပဲ ကာလတစ်ခုအတွင်း များပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီမျက်မြင်ဖြစ်ရပ်သင်ခန်းစာကနေ မေးခွန်းတစ်ခု မေးစရာ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
တစ်ဆယ်။ အဲသည်မေးခွန်းကတော့ . . . ရခိုင်ဒေသအတွင်းက အဲသည်လူအုပ်စုက ကိုယ့် ethnic identity ကို ကိုယ့်ဘာသာနာမည်ပေးခွင့် ရှိတယ် ဆိုလို့ အားလုံး ‘ရို’ နိုင်ကြပြီပဲဆိုသည့်တိုင်အောင် ဇာတ်လမ်းက ဒီနေရာမှာ မရပ်ဘဲ မြန်မာပြည်မဆီကို ဆက်လက်ကူးစက်ဦးမှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။
တဈ။ ပွီးခဲ့တဲ နှဈနှဈ ဆီးရီးယားဒုက်ခသညျအကပျြအတညျးကာလထဲက ၂၀၁၇-ခုနှဈ တဈနှဈတညျးအတှငျးမှာ မွထေဲပငျလယျကိုဖွတျပွီးသကာလ လူမှောငျခိုသင်ျဘောတှစေီးပွီးသကာလ ဥရောပတိုကျ အီတလီကမျးခွကေို ဆိုကျရောကျလာခဲ့တဲ့ ဒုက်ခသညျဆိုသူတှထေဲက အမြားဆုံးသော လူအရအေတှကျတို့ရဲ့ ပငျရငျးတိုငျးပွညျ (country of origin) ကို သငျတို့ သိကွပါသလား။ ဒီမေးခှနျးရဲ့အဖွကေတော့ “ဘင်ျဂလာဒရှေျ့” ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ ဆီးရီးယား ဒုက်ခသညျလှိုငျးကို ကွုံလို့ ဝငျစီးကွတာဖွဈပါတယျ။ (ကမျးပျေါကိုရောကျပွီးနောကျ အခွအေနအေခှငျ့အလမျးအပျေါမူတညျပွီး ရိုဟငျဂြာ လို့ အမညျခံသငျ့ရငျ ခံမယျ့ သဘောရှိတယျ။)
နှဈ။ ၂၀၁၂ နဲ့ ၂၀၁၇ အကွားကာလ (ဒီကာလနောကျပိုငျးလညျး ဆကျဖွဈနိုငျတယျ) မှာ နတျမွဈဝ ဝနျးကငျြကနေ ထိုငျးတောငျပိုငျးတရောကျ လူမှောငျခိုပို့တဲ့စကျလှတေျောတျောမြားမြား ဘယျကလူတှကေို ပို့တယျလို့ထငျပါသလဲ။ ရခိုငျအခွစေိုကျစကျလှတှေတေော့ မသိဘူး၊ ဘိတျအခွစေိုကျ စကျလှတှေကေတော့ မောငျတောကလူတှကေို ချေါတငျတာမဟုတျပါဘူး တဲ့။ ဘင်ျဂလာထဲကို တိုကျရိုကျဝငျလို့ လူချေါတငျပွီးနောကျ ထိုငျးတောငျပိုငျးနဲ့ မလေးရှားကို ပို့တာဖွဈပါသတဲ့။ စဈတှထေောငျထဲရောကျနခေဲ့တဲ့ ဘိတျ လူမှောငျခိုသမားအခြို့က ကြှနျတေျာ့ကို ပွောလိုကျတာ။ (သူတို့ပို့လိုကျတဲ့ လူတှကေတော့ ဟိုကိုရောကျရငျ ရိုဟငျဂြာ ဖွဈကို ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။)
သုံး။ ဒီလိုနညျးမြိုးစုံနဲ့ ကမ်ဘာအရပျရပျမှာ ပြံ့နှံ့နတေဲ့ သူတို့အချေါ ဒိုငျယာစပိုရာ ရို ဆိုသူတှရေဲ့ အရအေတှကျဟာ ဘယျလိုမြိုး သိနျးဂဏနျး ဘယျလိုမြိုး သနျးဂဏနျး ရှိနပေါတယျ လို့ သူတို့ ဖောငျးကားပွောဆိုထားတာ ရှိမရှိ လလေ့ာ ဆနျးစဈဖူးပါသလား။ အဲသညျ ဖောငျးကား ရို အရအေတှကျဟာ ခငျဗြားတို့က နိုငျငံတကာကို ကွောကျလို့ပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ကိုယျကို လဈဘရယျဆနျတယျလို့ ဂုဏျယူခငျြလို့ပဲဖွဈဖွဈ အဲသညျနာမညျလိမျကို လကျခံလိုကျပွီးနောကျပိုငျးမှာ မွနျမာပွညျထဲကို မိခငျတိုငျးပွညျအဖွဈ ဝငျရောကျလာကွမယျ့ အရအေတှကျဖွဈပါတယျ။
လေး။ မိုဟာမကျကို ဆကျခံသူမြားရဲ့ အစ်စလမျမဈ ဆူလတနျနိတျနိုငျငံတျောဟာ နညျးအမြိုးမြိုးနဲ့ ပွနျ့ကားခဲ့ရာမှာ အရှဘေ့ကျက အိန်ဒိယကိုရောကျလာခဲ့တဲ့ မဂိုအငျပါယာဟာ ရခိုငျ့နိုငျငံနဲ့ ထိတှပွေီ့းနောကျ ဒီလမျးကွောငျးမှာ ရှတေို့းတာ ရပျသှားခဲ့တယျ။ အခုတဈဖနျ ခတျေသဈ ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ အစ်စလမျမဈ ဆူလတနျနိတျပမာ တငျစားကွတဲ့ OIC ဟာ ဂမျဘီယာကို နာမညျခံခိုငျးပွီး ရခိုငျဒသေမှာ ဖွဈပှားခဲ့တာတှေ အတှကျ မွနျမာပွညျကို ICJ မှာ တရားစှဲတဲ့အတှကျ အခု တရားဆိုငျနရေတယျ။ (မွနျမာ ကိုယျစားပွု ရှနေ့ကွေီးက မနကေ့ ဒါကို အသအေခြာ ထောကျပွခဲ့တယျ။) ဒါဟာတိုကျဆိုငျမှု သကျသကျလို့ အသငျ ထငျပါသလား။
ငါး။ ဘင်ျဂလာနဲ့ မွနျမာအစပျက ယခုအခါ Cox’s Bazaar လို့​ချေါတဲ့ ဒသေဟာ နထေိုငျဖို့ရာ လူမရှိလို့ အင်ျဂလိပျတှကေ (အင်ျဂလိပျ​ဗိုလျ​ Cox က) ရခိုငျတှကေို ချေါယူနရောခထြားပွီး လူနအေိမျခွတှေေ ဖွဈစခေဲ့တယျဆိုတာကို အသငျ ကွားဖူးပါသလား။ Cox’s Bazaar မှာတောငျ ရခိုငျတှကေို ချေါပွီးနရောခထြားခဲ့ကွတာ ဆိုတော့ . . . Cox’s Bazaar ရဲ့ အရှဘေ့ကျကတြဲ့ မောငျတော နဲ့ ဘူးသီးတောငျမှာ အဲသညျအခြိနျက ဘင်ျဂါလီတှေ လုံးဝ ရှိခဲ့မှာ မဟုတျဘူး ဆိုတာကို သခြောပေါကျပွောနိုငျပါတယျ။ သတိထားစရာအခကျြက လူစီးကွောငျးဟာ အနောကျဘကျကို ရှသေ့ထကျရှလေ့ာပွီး နှဈငါးဆယျ တဈကွိမျကြ ဆနျးစဈကွညျ့တိုငျးမှာ သိသာတဲ့ ပထဝီလူဦးရေ အခြိုးအစား ပွောငျးလဲမှုတှေ ဖွဈနခေဲ့တယျဆိုတာကို သတိထားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ခွောကျ။ ၁၉၄၃ ဘင်ျဂလားအငတျဘေးမှာ ဘင်ျဂလားပွညျနယျတဈခုတညျးသကျသကျ လူ ၂.၁ သနျးနဲ့ သုံးသနျးကွား အငတျဘေးကွောငျ့သခေဲ့ရတယျ။ အဲသညျအခြိနျက တာဝနျအရှိဆုံးလို့ပွောရမယျ့ ဗွိတိသြှနနျးရငျးဝနျ ဝငျစတနျခြာခြီပွောခဲ့တယျဆိုတဲ့ တာဝနျမဲ့စကားတဈခှနျးကို အသငျ ကွားဖူးပါသလား။ သူကပွောတယျ တဲ့၊ အဲသညျဒသေသားတှဟော “ယုနျတှလေို သားပေါကျ” (bred like rabbits) တယျလို့ သူကပွောပါသတဲ့။ ရယျသှမျးသှေးလိုတဲ့သဘောနဲ့ ဒါကို ကြှနျတျောက ထပျဆငျ့ပွောတာတော့ မဟုတျဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီကနဒေီ့အခြိနျမှာ လြှပျစဈစှမျးအငျ total installed capacity မကျဂါဝပျ နှဈသောငျးကြျောပွီဖွဈတဲ့ နိုငျငံရေးတညျငွိမျမှု နဲ့ စီးပှားရေးတိုးတကျမှုတို့မှာ လမျးကွောငျးမှနျပျေါ ရောကျနပွေီဖွဈတဲ့ လူဦးရတေိုးပှားမှုကို အထိုကျအလြောကျထိနျးခြုပျလာနိုငျပွီဖွဈတဲ့ ဘင်ျဂလာအတှကျတော့ ဒီနဒေီ့အခြိနျမှာ လူဦးရတေိုးပှားမှု သညျပငျလြှငျ အငျအားဖွနျ့ကကျြမှုဖွဈတယျ။
ခုနဈ။ မနကေ့ ICJ တရားခှငျ ဒုတိယနမှေ့ာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ကိုယျစားလှယျ Agent ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဟာ ရို ဆိုတဲ့စကားလုံး တဈလုံးမှမပါဘဲ သူ့ရဲ့ statement ကို ပွောကွားသှားတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောစောငျ့ကွညျ့ ခြီးကြူးမိတယျ။ တဈနတေ့ညျးမှာပဲ အအေခေေါငျးဆောငျနဲ့ ဧရာတီသတငျးဌာနနဲ့ အငျတာဗြုးမှာ စဈတကောငျးသားဘင်ျဂါလီတှကေို ဘင်ျဂါလီတှလေို့ပဲ ချေါဝျေါတာဟာ လြျောကနျသငျ့မွတျမှုနဲ့ ကြိုးကွောငျးဆီလြျောမှု ရှိကွောငျးတို့ကို တငျပွပွောဆိုထားခကျြဟာ မွနျမာလူမြိုးမြားအားလုံးနဲ့တကှ ရခိုငျမြိုးဆကျသဈလူငယျမြား ဖတျရှုသငျ့တဲ့အကွောငျးအရာဖွဈတယျ ဆိုတာ သတိထားမိတယျ။ ရခိုငျတှရေော မွနျမာတှပေါ မူဆလငျတို့နဲ့ မလိုအပျဘဲ အကယျြအကယျြ မဖွဈသငျ့တဲ့အခွအေနမှော သူတို့ရဲ့လူသားဆိုငျရာ ရပိုငျခှငျ့တှကေို အသိအမှတျပွုသျောငွားလညျး ဘင်ျဂါလီလို့သာ သတျမှတျချေါဝျေါသငျ့ကွောငျးကို သံတမနျဆနျဆနျ သသေပျကနြစှာ သူ့ရဲ့ ရှငျးလငျးတငျပွမှုဟာ ဉာဏျပှငျ့မှုကို ဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။ “ဥပမာ လူသနျး ၂၅၀ လောကျက နတျမွဈကမျးကို ကူးလိုကျတာနဲ့ ဘင်ျဂါလီတဈယောကျမှ မရှိတော့ဘူးလား” ဆိုတဲ့စကားဟာ လငျးကနဲ လကျကနဲ မွငျသာစတေယျ။
ရှဈ။ မနကေ့ မွနျမာကိုယျစားပွု ဥပဒအေကြိုးဆောငျအဖှဲ့ကတငျပွရာမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ရို ဆိုတဲ့စကားလုံးကို လုံးဝ သုံးမသှားပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အကြိုးဆောငျရှနေ့ကွေီးက လိုအပျတဲ့နရောမှာ သုံးသှားတယျ။ အသုံးကယျြပွနျ့လာတဲ့စကားလုံးတဈလုံးကို ဥပုဘျသီလစောငျ့သလိုမြိုး လုံးဝရှောငျကွညျ ဝရောမဏိဖို့ရာ ခကျခဲတဲ့ အနအေထားတှေ ရှိကောငျးရှိနိုငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ မဟာဗြူဟာမွောကျ အခွအေနေ နဲ့ ထိုမဟာဗြူဟာမွောကျ အခွအေနတှေမှောရောကျနတေဲ့ လူပုဂ်ဂိုလျတှကေတော့ မဖွဈမနေ သညျအသုံးအနှုနျးကို လုံးဝအသိအမှတျ မပွုဖို့လိုတယျ၊ လုံးဝ မသုံးစှဲဖို့လိုတယျ။ ထမငျးရညျပူစညျး ရှိရမယျ့ ကွီးစှာသော အခွအေနတေောငျးဆိုခကျြ ရှိပါတယျ။
ကိုး။ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျးနှဈရာနှဈဆယျလောကျက Francis Buchanan Hamilton ဆိုသူ ဥရောပတိုကျသားတဈယောကျက အငျးဝ၊ အမရပူရ ဘကျမှာတှခေဲ့တဲ့ ရခိုငျသားအခြို့ကို မေးရာမှာ မိမိကိုယျကို ရခိုငျသား လို့ ချေါပါတယျလို့ ဖွခေဲ့တာသာလြှငျ ဖွဈနိုငျဖှယျရာရှိတဲ့ မှတျတမျးကိုအခွခေံပွီး Rooinga ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ အဲသညျအခြိနျကတညျးက ဒီလူမြိုး ရှိတယျလို့ သူတို့ ပုံဖျောတတျကွလရှေိ့တယျ။ ဒီလိုမြိုး နာမညျသဈလူမြိုးပုံဖျောမှုဟာ ၁၉၅၁-ခုနှဈမှာ စတငျပျေါပေါကျတယျ။ အခုအခြိနျမှာကတြော့ ရို နာမညျဟာ သမိုငျးအရ မှနျကနျမှုရှိမရှိ ဘကျက မဟုတျတော့ဘဲ လူအုပျစု တဈခုဟာ မိမိကိုယျကို စိတျကွိုကျနာမညျတပျခှငျ့ ရှိတယျဆိုတဲ့ဘကျက သူတို့ခဉျြးကပျလာကွပါတယျ။ ကနဦးမှာ ကိုယျကိုယျကို ဘင်ျဂလီလို့ ချေါတဲ့လူတှကေ အမြားတကာအမြားစုဖွဈပွီးတော့ ရို နာမညျသုံးစှဲကွတာကို ရှုပျရှုပျရှကျရှကျမွငျခဲ့ကွပမေယျ့ အဲသညျနာမညျကို သုံးလိုသူအရအေတှကျဟာ ရခိုငျဒသေနေ ကြှနျတေျာ့ မကျြစိရှမှေ့ာပဲ ကာလတဈခုအတှငျး မြားပွားလာတာဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ ဒီမကျြမွငျဖွဈရပျသငျခနျးစာကနေ မေးခှနျးတဈခု မေးစရာ ပျေါပေါကျလာပါတယျ။
တဈဆယျ။ အဲသညျမေးခှနျးကတော့ . . . ရခိုငျဒသေအတှငျးက အဲသညျလူအုပျစုက ကိုယျ့ ethnic identity ကို ကိုယျ့ဘာသာနာမညျပေးခှငျ့ ရှိတယျ ဆိုလို့ အားလုံး ‘ရို’ နိုငျကွပွီပဲဆိုသညျ့တိုငျအောငျ ဇာတျလမျးက ဒီနရောမှာ မရပျဘဲ မွနျမာပွညျမဆီကို ဆကျလကျကူးစကျဦးမှာလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးဖွဈပါတယျ။
Previous ICJ ကို တကျ​ရှငျး​နရေတဲ့ ​နေ့​တှမှော​တောငျ​ အရပျ​သား​တှကေို ရညျ​ရှယျ​ ပဈ​ခတျ​မှု​တှေ ရှိ​နတေယျ​
Next ICJ စှဲဆိုမှုအရေး BBC ၏ မေးမွနျးခကျြ ဗီဒီယိုဖွတျပိုငျး | ဦးကြျောဇောဦး